Koioxda Barcelona oo ku Guulaysatay koobka Uefa Super Cup-ka – Radio Daljir
Koioxda Barcelona oo ku Guulaysatay koobka Uefa Super Cup-ka
Agoosto 12, 2015 3:23 b 0
Arbaco, Ogoosto 12, 2015 (Daljir) —Kooxda Barcelona ayaa markii shanaad ku guulaysatay koobka UEFA Super Cupka kadib markii ay kulan waali ah oo aan la rumaysan karin ay kooxda Sevilla ku garaacday 5:4. Barcelona oo iska caabin layaableh kala kulantay kooxda Sevilla ayaa barbaraysay rekoodhkii guulaha koobka UEFA Super Cupka ee ay AC Milan haysatay.
Barcelona ayaa guushan ku gaadhay goolal ay udhaliyeen ciyaartoyda kala ah Lionel Messi oo laba gool oo cajiib ah dhaliyay, Suarez, Rafinha iyo Pedro oo min hal gool dhaliyay laakiin goolka Pedro ayay Barcelona guusha ku gaadhay. Waxaana Sevilla goolaha udhaliyay Banega, Reyes, Gameiro iyo Konoplyanka.
Barcelona ayaa ku guulaysatay koobkeedii ugu horeeyay ee xili ciyaareedka 2015/16.Messi iyo Iniesta ayaa barbareeyay rekoodhkii Xavi Hernandez iyaga oo Barcelona kula guulaystay koobabkoodii 25 aad.Suarez oo xili ciyaareedkiisii labaad bilawday ayaa isaguna koobkiisii afaraad Barcelona kula guulaystay.
Puntland oo si weyn looga Xusay Maalinta Dhalinyarada Adduunka
10 qof oo ku Geeriyooday weerar ka dhacay Nigiria